Fankalazana ny 26 jona: iandrandrana fiovana sy fanovana amin’izay | NewsMada
Fankalazana ny 26 jona: iandrandrana fiovana sy fanovana amin’izay
Par Taratra sur 25/06/2019
26 jona… Ankalazaina isan-taona. Hitondra na hitondrana inona amin’ity? Iandrandrana fiovana sy fanovana amin’izay…
26 jona 1960-26 jona 2019: 59 taona izay. Mby aiza ity hoe Fahaleovantena? Na eo amin’ny lafiny politika izay na toekarena, ohatra. Hatramin’izao, na ireo Nosy malagasy manodidina aza, ohatra, mbola iadiana fo amin’ny fanjakana frantsay. Manginy fotsiny ny hoe: iza no tena mifehy sy mitantana ny toekarena eto Madagasikara? Politika inona ny nifandovana eto hatramin’izay…
Amin’izao ankatoky ny faha-60 taon’ny niverenan’ny Fahaleovantena izao, miandrandra fiovana sy fanovana ny maro. Mba ho tompony mahazaka manana ny fitantanam-panjakana tokoa ny mpitondra, ary misitraka sy tsy ho tompony mangataka atiny amin’ny taniny sy ny harena ao aminy ny vahoaka. Ho an’ny Malagasy tokoa i Madagasikara ary ny Malagasy, ho an’i Madagasikara.
Miova mpitondra, miova sata…
Amin’izao fitondrana izao, efa manomboka hita soritra ny fiovana. Faramparany teo, ohatra, ny fahasahian’ny filoha Rajoelina Andry nangataka ampahibemaso ny hamerenan’ny fanjakana frantsay ireo Nosy malagasy manodidina. Toy izany koa ny fahasahiana niatrika ireo mpandraharaha solika ny amin’ny tsy maintsy nampidinana ny vidin-tsolika. Inona na ahoana koa ny manaraka?
Efa zava-dehibe koa ny fanafoanana ny fanasana eny amin’ny lapan’Iavoloha isaky ny 26 jona, ohatra, araka ny politika fitsitsiana. Tsy inona fa fiatrehana izay tena fampandrosoana ny fiainan’ny vahoaka ifotony. Tsy ho endri-javatra ivelany sy mandalo izay hoe atao amin’izao fankalazana ny 26 jona izao fa tena hitondra fiovana sy fanovana eo amin’ny fomba fijery sy fomba fiasa amin’izay.
Mbola iadiana ny Fahaleovantena
Amin’izany rehetra izany, tsy azo lavina fa mbola iadiana ny hoe Fahaleovantena: tsy fiankinan-doha amin’ny hafa, tsy famelana ny hafa hitsabaka amin’ny raharahan-tokantranon’ny tena. Tsy misy afa-tsy ny fandraisana an-tanana mivantana ny hoavin’ny tena sy ny firenena ny antony. Mila fahasahiana, fanapahan-kevitra, fijoroana, fahavononana, firosoana, fitozoana…
Mba tsy handalo sy endri-javatra ivelany fotsiny tokoa izao fankalazana ny fiverenan’ny Fahaleovantena izao fa tena hitondra fiovana sy fanovana anatiny ho amin’ny tena fampandrosoana ny firenena sy ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka tokoa. Tsy ny asa vita no ifampitsarana ny amin’izay?